Iindawo zeMarike zokuTyikitya: Ukuzisa iibhodi zebhodi kwi 'Cofa ukuze uthenge' isizukulwana | Martech Zone
Iindawo zeMarike zokuTyikitya: Ukuzisa iibhodi zebhodi kwi 'Cofa ukuze uthenge' isizukulwana
NgoLwesibini, Novemba 1, 2016 NgoLwesibini, Novemba 1, 2016 UAndy Hamblin
The Ngaphandle kwentengiso yasekhaya Icandelo lishishini elikhulu elinengeniso. Kule minyaka yobunzima bedijithali, ukunxibelelana nabathengi xa "besendleleni" kwiindawo zikawonkewonke zisabambe ixabiso elikhulu. Iibhodi zezikhangiso, iindawo zokufihla iibhasi, iiposta kunye nezibhengezo zothutho ziyinxalenye yobomi babathengi bemihla ngemihla. Banikezela ngamathuba amaninzi okusasaza ngokucacileyo umyalezo kubaphulaphuli abafanelekileyo ngaphandle kokukhuphisana nokuqwalaselwa phakathi kwamawaka ezinye iintengiso.
Kodwa akusoloko kulula ukufumana iphulo lokuNgaphandle kweKhaya emhlabeni. Owona mceli mngeni ujongene nomzi mveliso we-OOH kukufikeleleka kwayo…
Ufumene i-100,000 ye- $ ye-OOH?
Ingxaki abajongana nayo Abanini beMithombo yeendaba kukuba kubabiza ngokufanayo ukucwangcisa kunye nokubhukisha iphulo le- $ 100,000 njengoko lisenza iphulo le- $ 500. Inani elifanayo lexesha lokuthengisa, ixesha elifanayo lolawulo, ixesha elifanayo loyilo konke kungena kwibhodi yebhodi yebhodi ende yeeveki ezimbini zeenkonzo zebhodi yaseJoe Bloggs, njengoko isenza kwiphulo likazwelonke, elikhulu kuhlahlo-lwabiwo mali oluqhuba iinyanga.
Ayisiyiyo-brainer ngokwenyani. Ukuba ungumnini weendaba kunye neebhilibhodi zokurenta, uza kubeka phambili loo maphulo esizwe anokuhlawula imali enkulu. Yintoni enokwenza kube nzima kumashishini amancinci aneebhajethi ezithobekileyo ukuba ajongeke xa eqesha indawo yentengiso yangaphandle. Kwaye lihlazo, kokubini kula mashishini amancinci aphulukana namathuba amahle okuthengisa, kunye nabanini beendaba, abaphoswa ngabathengi abaninzi.
Isisombululo sisixhobo esizisebenzelayo
Ngaphandle kwekhaya iingcali zentengiso, Umqondiso womqondiso Ndenze isisombululo kule ngxaki. Basebenzisana nabanini beendaba kunye nabanikezeli beenkonzo ukuzenzekelayo yonke inkqubo yokubhukisha. Ukuzenzekelayo kwenza ukuba inkqubo isebenze ngakumbi, okuthetha ukuba abanini beendaba akufuneki bajike abathengi ngokusekwe kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Isoftware abayisebenzisayo ukwenza oku ibizwa ngokuba Iindawo zentengiso zeSignkick.
Iindawo zentengiso zeSignkick OOH
Indawo yentengiso yakwaSignkick sisoftware abanokuthi bayimise abanini beendaba ukwenza ukuba abathengi bafumane kwaye babhukishe indawo yabo yentengiso kwi-intanethi. Inxibelelana neenkqubo zabanini beendaba ukubonisa ubukho bexesha leziza zeposta kubaxumi kwiimephu ezikwi-intanethi.
Yenzelwe ukwenza indawo yentengiso ye-OOH ifikeleleke kuye wonke umntu, iindawo zentengiso zeSignkick zenza ukuba amashishini:
Khangela kwaye ubhukishe indawo yentengiso kwi-intanethi -Abaxhasi banokubona ngokukhawuleza ukuba zeziphi iiposta zeposta, iibhodi zezaziso kunye nezikrini zedijithali ezikhoyo, ixesha elingakanani kunye neendleko. Abanini beMithombo yeendaba banokukhetha ukhetho lwabo ngokwesiko, njengexabiso eliboniswe kwiindawo, loluphi ulwazi olongezelelekileyo lokuboniswa, nokuba iqonga livulelekile eluntwini, okanye kubathengi babo abathembekileyo ngqo nakwiiarhente.
Landa umkhankaso Nje ukuba indawo yokubhengeza ibhukishe abathengi banokuyilandela inkqubela phambili yayo, ngokungathi ubuya kuhamba kwinkqubo yokuhambisa ipasile.
Lawula umsebenzi wobugcisa -Abaxhasi banokulayisha eyabo imisebenzi yobugcisa, okanye basebenzisane nabanini beMedia ukuyila ubugcisa kwintengiso yabo. Inkqubo inenkqubo ehleliweyo, eqala ngokuthumela iinkcukacha zobugcisa kubathengi kwindawo yokubhukisha kwaye iphele ngomsebenzi wobugcisa oziswa kwiprinta oyithandayo.
Fumana izikhokelo zezikhumbuzo kunye nohlaziyo lwe-imeyile Izikhumbuzi ezizenzekelayo kunye nohlaziyo ziqinisekisa ukuba inyathelo ngalinye lenkqubo linxibelelana kakuhle nomthengi, kodwa njengezandla ezingenakho kumnini weendaba ngangokunokwenzeka.
Ngokungafaniyo nenye isoftware efumanekayo yokubhukisha indawo yokuthengisa ngaphandle, iindawo zentengiso zeSignkick azijongi nje kwiDigital Out of Home. Inkqubo yenza ukuba abathengi bakwazi ukulandelela iiposta zabo zokushicilela zakudala kunye neebhodi zeebhodi ngendlela efanayo abanokuthi bakwazi ngayo ukulandelela iipowusta zabo zedijithali.
Imisebenzi yokuxela ivula amathuba amatsha aBanini beMithombo yeendaba
Iindawo zentengiso zeSignkick zinomsebenzi wesibini, ekukuqokelela kunye nokuhlalutya idatha esekwe kulowo uthengela indawo yentengiso ye-OOH. Ngokuhlalutya imikhwa yabathengi babo, into abayijongileyo kwaye nini, Abanini beMithombo yeendaba banokumilisela amaxabiso asezindlini axhaswe yidatha, baphuhlise ingeniso entsha kwaye benze iinkqubo zokuthengisa ezisebenzayo.
Isifundo semeko yokuSayina: JCDecaux
Intlanzi enkulu kumzi-mveliso we-OOH, iJCDecaux kutshanje isebenze neeSignkick Marketplaces ukufumana ukubhukisha okuzenzekelayo kwiindawo zabo zentengiso eBelgium. I-JCDecaux iqaphele isidingo sokuhlengahlengisa iinkqubo zabo ukuze kuvulwe iindlela ezintsha zeshishini.
Ngokwenza ukuba inkqubo yokubhukisha isebenze ngakumbi, kwaye ivumele abathengi ukuba balawule amaphulo abo, i-JCDecaux ikwazile ukugxila ngakumbi kwicebo lokuthengisa kunye nokwakha ubudlelwane nabo banokuba ngabathengi. Ikwathetha ukuba babenakho ukuthengisa indawo yentengiso kunye nokwakha ubudlelwane kunye nabathengi ngohlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Xa loo maphulo amancinci entengiso eqala ukukhula, iJCDecaux iya kuba yeyokuqala ukwazi.
Yonke intle intsha, ineeJCDecaux's website entsha ibiphezulu kwaye iqhuba iinyanga ezi-2 kuphela, kodwa ukubhukisha sele kungenile.
Ukuzenzekelayo ikamva le-OOH
Amaxesha ayatshintsha, injalo nendlela abantu abalindele ukuthenga ngayo. Kule minyaka yedijithali ungathenga yonke into ukusuka kwimpahla kunye nokutya, iimoto kunye neeholide kwi-intanethi. Ke kutheni ungaposti kunye neebhodi zeebhodi?
Iindawo zentengiso zeSignkick zivumela abanini beendaba ukuba bafikelele cofa-ukuthenga isizukulwana, kunye nokwamkela abathengi ngohlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Ukubhukisha okuzenzekelayo kunye nokucwangciswa kwemikhankaso yentengiso kuvumela wonke umntu ukuba afikelele kwiinkonzo namathuba awayekhe afumaneka kubathengi abakhulu kuphela.
tags: JCDecauxOOHOOH esizisebenzelayongaphandle kwekhayauphawu
UAndy ebekwishishini langaphandle ngaphezulu kweminyaka eli-10, esebenza kuzo zombini izicwangciso kunye nokuthengwa kwamaphulo kunye nentengiso. I-CV yakhe ibandakanya uninzi lwamagama ahlonitshwayo kwishishini kubandakanya iPosterscope, JCDecaux kunye neECNlive ngaphambi kokujoyina. Umqondiso womqondiso Ngo-2014. Ungummeli onomdla wokwazisa iteknoloji esebenza kumzi-mveliso weepowusta ngenjongo yokuphucula intsebenzo kunye nengeniso ekhulayo.